निशा घिमिरेलाई करिश्मा र रेजिनाले गरे आर्थिक सहयोग « रिपोर्टर्स नेपाल
(Friday 15th October 2021)
निशा घिमिरेलाई करिश्मा र रेजिनाले गरे आर्थिक सहयोग
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
काठमाडौं, ३१ जेठ । सवारी दुघर्टनामा परेर ‘ब्रेन इञ्जुरी’ भएकी अभिनेत्री तथा मोडल निशा घिमिरेलाई अभिनेत्री द्वय करिश्मा मानन्धर र रेजिना उप्रेतीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । नेपाल चलचित्र कलाकार संघको समन्वयमा द्वय अभिनेत्रीले शनिबार निशा बस्दै आएको घर ललितपुरमै पुगेर उनका बाबु प्रेम प्रसाद घिमिेरेलाई नगद प्रदान गरेका हुन् ।
करिश्माले २५ हजार र रेजिनाले १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । निशाको हाल नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । हाल अमेरिकामा बस्दै आएका नायिका उषा पौडेलले पठाएको २२ हजार, प्रकाश थापाले पठाएको १० हजार रुपैयाँ पनि घिमिरेको परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको कलाकार संघले जनाएको छ ।
संघका प्रवक्ता मोहन निरौलाले कलाकारको अबस्थालाई मनन गरेर निशुल्क उपचारको व्यबस्था गरिदिएकोमा नर्भिक अस्पताल बिशेष गरी साहित्यकार, समाजसेवी तथा नर्भिक अस्पतालका संस्थापक बशन्त चौधरी र निर्देशक मेघा चौधरीप्रति विज्ञप्ती जारी गरी आभार व्यक्त गरेका छन् । निरौलाले संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खडकाको नेतृत्वमा निशाको लागि सहयोग अभियान संचालन गरेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
डिप्लोमा अध्ययनका लागि भारत पुगेकी निशा सवारी दुर्घटनामा परेकी हुन् । जसको कारण उनको ब्रेन ह्यामरेज भयो । दुर्घटनामा परेपछि लामो समय भारतमै उपचार भयो । तर अस्पतालको खर्च धान्न नसकेपछि परिवारले उनलाई नेपाल ल्याएको थियो । निशाको उपचार गर्दागर्दै परिवारको सम्पत्ति सकिएको परिवारले बताएको छ । निशाका परिवार कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि हाल भैसीपार्टीस्थित टिनले बारेर एउटा झुप्रोमा बसेका छन् ।
रामजी खाँण र टिका पुनसँग ऋषि धमलाको रोचक कुराकानी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २९ असोज । चर्चित गायक रामजी खाँण र गायिका टिका पुनसँग पत्रकार ऋषि धमलाले
अनुपम खेर सगरमाथाको फेदमा मस्त, अमिताभ र डेनी पनि आउँदै
काठमाडौं, २८ असोज । बलिउड कलाकार अनुपम खेर नेपालमा छन् । उनी सगरमाथाको फेदमा बसेर
सदावहार करिश्मा यसरी खुलिन्
काठमाडौं, २७ असोज । नेपाली चलचित्रकी सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धर ५० कटिसकेकी छिन् । उमेरले
‘पिउने बानी भो’ बोलको गीत म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं, २७ असोज । मिठो भाकाको सेन्टीमेन्टल गीत म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको छ। निर्देशक तथा कलाकार
नायिका आँचल पतिसँग मस्त
काठमाडौं, २६ असोज । नायिका आँचल शर्मा वैवाहिक जीवनमा चुर्लुम्म डुबेकी छिन् । पति डा.
दीपकराज गिरी भन्छन् : महान को हो ? त्यो निर्णय हामीले गर्ने होईन
काठमाडौं, २६ असोज । चलचित्र निर्माता, निर्देशक तथा नायक दीपकराज गिरीले महान को हो ?
मिस लिटिल नेवा नेपाल ११४१ मा सहभागीहरु अन्तिम स्पर्धामा भिड्नका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त
काठमाडौं, २५ असोज । नेवार किशोरीहरुको आत्मविश्वास बृद्धी तथा नेवारी कला, संस्कार, भाषा तथा संस्कृतिका
सामंथाले अफेयर र गर्भपतनको बारे दिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी, २५ असोज । साउथकी सुन्दर अभिनेत्री सामंथा अहिले व्यक्तिगत जीवनको कारण चर्चामा छिन् ।
तालिवानको तारोमा परेका महिला फुटबलर अफगानिस्तानबाट कतार लगिए
एजेन्सी, २९ असोज । तालिवानको तारोमा परेका अफगानिस्तानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका खेलाडीहरुको उद्धार भएको
भारत र पाकिस्तानभन्दा नेपालमा कम भोकमरी
काठमाडौं, २९ असोज । विश्व भोकमरी सूचांकमा नेपाल ७६औं स्थानमा पुगेको छ । दुई दशकमा